वनभोज किन पिकनिकमा परिणत भएको होला ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः माघ ९, २०७४ - साप्ताहिक
वनभोज किन पिकनिकमा परिणत भएको होला ?
वनमा खाइने भोजलाई वनभोज भनिन्छ, तर अहिले वन लोप हुँदै गएको छ । वन असुरक्षित अनि सुविधाजनकसमेत नभएकाले मानिसहरू सुविधासम्पन्न तर रमणीय स्थानमा रमाइलो गर्न चाहन्छन् । त्यसैले वनभोज वनमा खाइने भोज नभएर आधुनिक पिकनिक भएको छ ।
अंग्रेजीकरण भएकाले । बात वही, सोच नई ।
जित राघव, व्यवसायी/अभिनेता
वन नै छैन, अनि कसरी मन हुन्छ त वनभोज मनाउने ?
नेपालमा वन हुञ्जेल वनभोज हुन्थ्यो । भएको वनजति फँडानी गरेर घर बनाइसके, अब केको वनभोज ।
पहिले पो वन–जङ्गल धेरै थिए र वनभोज खान गइन्थ्यो । अहिले वन मासिए, त्यही भएर पिकनिक ।
मानिस अल्छी भएकाले । वनभोजमा आफैं पकाएर खाइन्थ्यो । अचेल क्याटरिङको सहयोग लिने चलन छ । त्यही भएर पिकनिक भनिन्छ ।
उषा खड्गी, मिस नेपाल २००५
कम्प्युटर युग र अंग्रेजी बोर्डिङ स्कुलको प्रभाव हो यो ।
वनभोजलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिएकाले ।
वनभोजमा वन नभएर भोज मात्र भएकाले अब के भन्ने भनेर पिकनिक भनियो । वनमा घर बने अनि वनभोजको सहरीकरण भयो र बन्यो पिकनिक ।
दिपक थापा, ओलम्पिक रेफ्री
जसरी धन्यवाद ‘थ्याङक्यु’मा परिणत भयो ।
नजिकै हुन्थ्यो वन, अनि वनभात वा वनभोज पनि खाइन्थ्यो । फडानी गरेपछि वन टाढा पुग्यो । अब वनै नभएपछि पिकनिक त भन्नुपर्ने भयो नि ।
वनभित्र खाए पो वनभोज त ? पार्कभित्र खाइएपछि त्यो त पिकनिक नै हुने भयो नि ।
समयसँगै भाषा–संस्कृति समेत परिवर्तन हुँदै जान्छ । यो त्यसकै असर हो, तर यो एउटा विकृति पनि हो । हामी नेपालीहरू आफ्नो भाषा संस्कृतिभन्दा बढी देखासिकीमा गर्व गर्छौं ।
शबिर श्रेष्ठ, निर्देशक
आधुनिकताको विस्तारले गर्दा ।
बढी आधुनिक भएर ।
समय अनुसार आधुनिक हुँदै गएर ।
नेपालीमा वनभोज नै त भनिन्छ । अंग्रेजीमा पो पिकनिक नि । नाम परिवर्तन भएको होइन, मनाउने तरिका परिवर्तन हुँदै गएको हो । पहिले–पहिले रमाइलो ठाउँमा दाउरा बालेर आफै पकाएर खान्थे, अहिले क्याटरिङको बफे भोजमा रमाउँछन्— फरक यति मात्र हो ।
बोर्डिङ स्कुल धेरै खुलेपछि नेपालीहरू अंग्रेजी धेरै जान्ने भए त्यसैले वनभोजको साटो पिकनिक भन्न थाले ।
सामिप्य तिमिल्सिना, चलचित्र लेखक
जनता वनको छेउमा बस्न छाडे, त्यसैले ।
सुनिल क्षेत्री, नृत्य निर्देशक
वास्तवमा वनभोजलाई अंग्रेजीमा पिकनिक नै भनिन्छ । सबैलाई पिकनिक भन्न सजिलो भयो होला, त्यसैले वनभोज भन्न छाडेर पिकनिक भन्न थाले ।
सुवास प्रधान, संगीतकर्मी
पहिले–पहिले जङ्गलतिर गै खाने कुरा बनाएर खाइन्थ्यो, तर अहिले जङ्गलभन्दा नि विशेष प्रर्यटकीय स्थलहरूतिर गइन्छ, तर यसलाई कसै–कसैले वनभोज नै भन्छन् । अंग्रेजी शब्द बढी प्रयोग हुन थालेकाले पिकनिक भनेका होलान् ।
वनमा आफैं पकाएर खान दु:ख हुने भएकाले अरुले पकाएको खान थालेपछि पिकनिक भएको हो ।
विनु खड्का, आरजे
खाँदा–खाँदा पीकमा पुगेपछि मात्र निको हुने भएकोले पिकनिक भनिएको होला । फेरि वनभोज हुन त वनमा खानुपर्‍यो नि ? आजकल पार्क भोज हुन्छ क्यारे— त्यसैले पिकनिक !
अलिक अगाडिको समयमा जङ्गल, पाखो वा खेतमा साथीभाइ मिलेर भोज खाने चलन थियो । त्यसैलाई वनभोज भनिन्थ्यो । त्यति बेला यातायातको पर्याप्त ब्यवस्था थिएन । कतै टाढा जान सम्भव थिएन । बिस्तारै सबैतिर यातायात पुग्न थाल्यो, सबै तिर नयाँ–नयाँ पिकनिक स्पट बन्न थाले, यही क्रममा वनभोज बिस्तारै पिकनिकमा परिणत भयो ।
विशाल घिमिरे, गायक